Gufgaf|Online ’सालको पातमा’ मरिश्का कुलेन्द्रको लागि फिट, बसन्त डक्टरनिको पछि लाग्दा होला त हिट ?
’सालको पातमा’ मरिश्का कुलेन्द्रको लागि फिट, बसन्त डक्टरनिको पछि लाग्दा होला त हिट ?
सर्जक, संगीतकार, गायक हुदै मोडलको रुपमा समेत आफ्नो नाम बनाई सकेका बसन्त थापा भन्ने बित्तिकै लोक तथा दोहोरी गीत मन पराउने तपाँई हामी सबैले चिन्छौँ । उनले सिर्जना गरेका ’डाँडै फुर्के सल्लो’,’डाँडै बिसौनी’, ’बाग्लुङ बजारमा’ मा लगायतका गीतहरु चर्चामा छन् ।
मिठो स्वरका धनि बसन्तका गीतहरुलाई जुनसुकै उमेर समूहकाले पनि मन पराएको पाईन्छ । एक दशक भन्दा बढी समय देखि निरन्तररुपमा लोकगीत, संगीतमा सक्रिय बसन्तका प्राय सबै गीतहरु दर्शक तथा श्रोताले मन पराएका नै हुन्छन् । मिजासिला ब्यबहारका बसन्तका सिर्जनाहरुबाट नै थुप्रै कलाकार तथा सर्जकहरु पनि स्थापित भैसकेका छन् । पुरानालाई सम्मान गर्दै नयाँलाई अबसर दिने बसन्तका गीतहरुमा मौलिकता पनि पाईन्छ ।
एनको सिर्जनामा गत महिना सार्बजनिक भएको ’सालको पात’ बोलको गीतले पछिल्लो समय निकै चर्चा पाईरहेको छ । २७ लाख भन्दा बढीले हेरीसकेको गीतलाई निकै राम्रो प्रतिक्रिया समेत आईरहेको छ ।
कुलेन्द्र विश्वकर्मा र बिष्णु माँझीको आवाज रहेको यस गीतमा कुलेन्द्र, बसन्त र नायिका मरिश्का पोखरेलको अभिनय रहेको छ भने बसन्तकै संगीत रहेको छ । गीतमा बसन्त र कुलेन्द्र मरिश्काको माँयामा परेका छन् तर मरिश्का भने अन्तिममा अर्कै सँग गएकी छिन् ।
उनै गायक बसन्त थापाको आवाजमा रहेको ’म त गाउँले ठिटो’ बोलको गीत बिहिबार सार्बजनिक भएको छ । बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच चर्चित सर्जक एक नारायण भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त गीतको भिडियो सार्बजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा गायक तथा सर्जक याम क्षेत्री, सर्जक प्रलाद सुबेदी, गायक कुलेन्द्र बिश्वकर्मा मोडल तथा गायक दुर्गेश थापा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
गीतमा दिपेन्द्र अधिकारीको शब्द र बसन्त थापाकै संगीत रहेको छ । प्रथम खड्काको निर्देशन रहेको गीतमा उत्सब दाहालको छायांकन रहेको छ । गीतमा अनन्त घिमिरेको सम्पादन रहेको छ । बसन्त र जुना सुनदासको अभिनय रहेको भिडियोमा बसन्त गीतको शब्द जस्तै गाउँले ठिटोको भूमिकामा रहेका छन् भने जुना डक्टरको भूमिकामा रहेकी छिन् । गाउँबाट पहिलो पटक राजधानी आएका बसन्त बिरामी परेर अस्पताल पुगेपछि डाक्टरनि जुनालाई देखेपछि के के भयो त्यो भिडियोमा देखाईएको छ ।
गीत सार्बजनिक पछि बोल्दै प्रमुख अतिथि सर्जक एकनारायण भण्डारीले गीतको तारिफ गर्दै सबै टिमलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए । भन्डारीले गीतसँगै बसन्त थापाको पनि खुलेरै तारिफ गर्दै बसन्तका यस अघिका गीतहरु पनि राम्रो हुने र म त गाउँले ठिटो पनि निकै राम्रो बनेकोमा बधाई तथा शुभकामना पनि दिएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरु याम क्षेत्री, प्रल्हाद सुबेदी, दुर्गेश थापा लगायतले शुभकामना तथा बधाई दिएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै बसन्त थापाले उपस्थित सबैलाई धन्यबाद प्रकट गरे र्र आफ्ना अगाडीका गीतहरुले जस्तै यो गीतले पनि माया पाउने आशा रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा पछिल्लो समय मोडलिङमा पनि देखिनु भएको छ के मोडलिङलाई पनि ब्यबसायिक बनाउन खोज्नु भएको हो ? भनेर प्रश्न गर्दा बसन्तले लजाउदै भने ’ब्यबसायिक बनाउने भन्दापनि आफ्नो गीतमा सकेसम्म आफै अभिनय गर्ने शैली पछ्याएको दर्शकको आँखा बिझाएको हुँ, यध्यपी आगामी दिनमा कम्मर मर्काउन अझ सिक्दै छु ।’ यध्यपी ’म त गाउँले ठिटो’ ले पनि बसन्तका आघिल्ला गीतहरुले जस्तै दर्शक तथा श्रोताको मि जित्न सफल होस् गफगाफको तर्फबाट शुभकामना रहेको छ ।